အေရိုးဗစ်လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်အလေးမခြင်းသည် ဦး နှောက်ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည် - မတူညီသောယန္တရားများမှတစ်ဆင့် (၂၀၁၃) - သင်၏ Brain On Porn
အေရိုးဗစ်လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်မြှင့်တင်ခြင်းသည် ဦး နှောက်ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည် - အမျိုးမျိုးသောယန္တရားများမှ (၂၀၁၃)
ဧပြီလ 10, 2013, 12: 01 နံနက်
လေ့ကျင့်ခန်းမှတဆင့်တစ်ဦးနှောက် Boost ရယူခြင်း
အသစ်နှစ်ခုစမ်းသပ်ချက်, တဦးတည်းပါဝင်သောလူများနှင့်အခြားတိရစ္ဆာန်များလေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးမျိုးအတော်လေးကွဲပြားခြားနားဦးနှောက်ကိုထိခိုက်ဟန်ပေမယ့်, ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းသိသိသာသာမှတ်ဥာဏ်တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်နိုငျသောအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါသတင်းကိုသိမြင်ကျဆင်းမှုများအတွက်အများဆုံးအန္တရာယ်မှာအသက်အရွယ်အုပ်စုများဝင်နေသောကိုကြီးထွားလာနံပါတ်များအဘို့သက်သာပူဇော်စေနိုင်သည်။
ထိုသို့ပြန် 1990s ၌ရှိ၏ အဆိုပါ Salk တက္ကသိုလ်သိပ္ပံပညာရှင်များ , La Jolla ကာလီဖိုးနီးယားအတွက်ဇီဝလေ့လာရေး။ , ပထမဦးဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းကတော့ဦးနှောက်ကိုတက် bulks ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သဲစမ်းသပ်ချက်များတွင်သူတို့ဘီးအပြေးမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေးထားသောကြွက်ကို run မတိရိစ္ဆာန်များထက်ဦးနှောက်ကိုထိန်းချုပ်မှတ်ဉာဏ်ဖန်တီးမှုတစ်ခုဧရိယာ၌ ပို. ဆဲလ်တွေထုတ်လုပ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ အဆိုပါကျင့်သုံးတိရိစ္ဆာန်များပြီးတော့သူတို့ရဲ့အထိုင်များ labmates ထက်မှတ်ဥာဏ်စမ်းသပ်မှုအပေါ်ပိုကောင်းဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။
ထိုအချိန်မှစ. သိပ္ပံပညာရှင်များဟာမော်လီကျူးအဆင့်မှာ, လေ့ကျင့်ခန်းမှတ်ဥာဏ်တိုးတက်ကောင်းမွန်တိကျစွာဘယ်လိုနားလည်ရန်လုပ်ဆောင်နေအဖြစ်အလေးချိန်လေ့ကျင့်ရေးအပါအဝင်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးအစားအားလုံးကို, ဟုတ်မဟုတ်ပြီ, အကျိုးရှိသောဖြစ်ကြသည်။
လူ့လေ့လာမှုအဘို့, အိုမင်းခြင်းဟာသုတေသနများ၏ဂျာနယ်ထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေဗြိတိသျှကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်မှသိပ္ပံပညာရှင်များ, ပျော့သိမြင်မှုချို့ယွင်းရှိသည်ဖို့တွေ့ရှိခဲ့သော 70 ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့ memory ကိုတစ်ဦးအခွအေနေအမြိုးသမီးမြားအသက်အရွယ် 80 များစွာစုဆောင်းနှင့်ပေးထားသောအသက်အရွယ်မှာမျှော်လင့်ထားမည်ဖြစ်ကြောင်းထက်ပိုငျစတငျလှဲမှားစဉ်းစား။
အပျော့စားသိမြင်မှုချွတ်ယွင်းလည်းစိတ်ဖောက်ပြန်တိုးပွားလာများအတွက်အသိအမှတ်ပြုအန္တရာယ်အချက်တခုဖြစ်ပါသည်။ အခြေအနေနှင့်အတူ Senior ပြတ်သားအမှတ်တရများအားဖြင့်ထိုအတူအသက်တွေထက်အများကြီးပိုမိုမြင့်မားမှုနှုန်းမှာအယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါဖွံ့ဖြိုး။
ဥပမာအားဖြင့်တစ်ဦးလူစိမ်းရဲ့အမည်နှင့်သင်မည်သို့မိတ်ဆက်ခဲ့ကြသည်, - အစောပိုင်းကသုတေသီများ၏တူညီသောအုပ်စုသည်အလေးချိန်လေ့ကျင့်ရေးပြီးနောက်ပျော့သိမြင်မှုချို့ယွင်းနှင့်အတူအဟောင်းများအမျိုးသမီးတွေကသူတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့မှတ်ဉာဏ်, ဒါမှမဟုတ်အခြေအနေတွင်သောအရာတို့ကိုမှတ်မိနိုင်စွမ်းတိုးတက်ကြောင်းတွေ့ရှိရလေသည်။
အခုတော့သိပ္ပံပညာရှင်များမှတ်ဉာဏ်ကိုပိုမိုမရှိမဖြစ်အမျိုးအစားများကိုကြည့်ချင်ခဲ့, သောကောင်းစွာခံနိုင်ရည်လေ့ကျင့်ခန်းမှာ။ ဒါကြောင့်သူတို့ကကျပန်းကြီးကြပ်လေ့ကျင့်ခန်း၏ခြောက်လမှ၎င်းတို့၏စေတနာ့ဝန်ထမ်းတာဝန်ပေးအပ်။ အမျိုးသမီးတချို့ကနှစ်ကြိမ်တစ်ပါတ်အလေးရုပ်သိမ်း။ အခြားသူများက briskly သွားလာ၏။ ထိုအခါအချို့တစ်ထိန်းချုပ်မှုအတိုင်းအတာအဖြစ်, ခံနိုင်ရည်လေ့ကျင့်ခန်းကျော်သွားနဲ့အစားကိုဆန့်နှင့် Tone ။
အဆိုပါခြောက်လရဲ့ start နဲ့အဆုံးမှာမိန်းမတို့ကိုသူတို့နှုတ်နဲ့ Spatial မှတ်ဉာဏ်ကိုလေ့လာဖို့ဒီဇိုင်းစမ်းသပ်မှုတစ်ခုဘက်ထရီပြီးစီးခဲ့သည်။ နှုတ်ဖြင့်မှတ်ဉာဏ်သည်အခြားအမှုအရာတို့တွင်အသင်၏စကားမှတ်မိဖို့စွမ်းရည်နှင့် Spatial မှတ်ဉာဏ်အမှုအရာတခါအာကာသ၌ထားကြ၏ဘယ်မှာသင့်ရဲ့အောကျမေ့ဖြစ်ပါသည်, ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးအသက်နှင့်အတူအပျော့စားသိမြင်မှုချို့ယွင်းနှင့်အတူလူအတွက်ချဲ့ကားပြောဆိုမှုများရဲ့ဆုံးရှုံးမှုဆိုးရွား။
နှင့်ဤလေ့လာမှု၌, ခြောက်လပြီးနောက်, Tone အုပ်စုမိန်းမတို့ကိုသူတို့လေ့လာမှုရဲ့ start မှာရှိခဲ့ပါတယ်ထက်မှတ်ဥာဏ်စမ်းသပ်မှုအပေါ်ပိုဆိုးသွင်းယူခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့မှတ်ဥာဏ်ချို့ယွင်းစိုက်ပျိုးခဲ့သည်။
ဒါပေမယ့်ကျင့်သုံးခဲ့သောအမျိုးသမီးများ, လမ်းလျှောက်ခြင်းဖြင့်သို့မဟုတ်အလေးချိန်လေ့ကျင့်ရေးဖြစ်စေ, သူတို့မရောက်မီခဲ့ထက်ခြောက်လအကြာတွင်နီးပါးအပေါငျးတို့သသိမြင်စမ်းသပ်မှုတွေအပေါ်ပိုကောင်းဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။
နှစ်ဦးစလုံးစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းအုပ်စုများ Spatial မှတ်ဉာဏ်၏စမ်းသပ်မှုအပေါ်နီးပါးအညီအမျှတိုးတက်နေစဉ်, လမ်းလျှောက်ခဲ့သူမိန်းမများအလေးရုတ်သိမ်းခဲ့သောမိန်းမများထက်နှုတ်မှတ်ဉာဏ်အတွက် သာ. ကြီးမြတ်အကျိုးအမြတ်ပြသခဲ့သည်။
ဤအတွေ့ရှိချက်အကြံပြုကဘာလဲ, စာရေးသူကောက်ချက်ချ, ခံနိုင်ရည်သင်တန်းနှင့်အလေးချိန်လေ့ကျင့်ရေးဦးနှောက်အတွင်းကွဲပြားခြားနားသောဇီဝကမ္မသက်ရောက်မှုရှိသည်နှင့်မှတ်ဉာဏ်အမျိုးမျိုးအတွက်တိုးတက်မှုများဖြစ်ပေါ်စေခြင်းအလိုငှါဖြစ်၏။
ဒါကစိတ်ကူး၏ရလဒ်များကိုနှင့်အတူကြင် tallies စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်မှတ်ဉာဏ်၏အခြားမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှု, သောဓာတ်ခွဲခန်းကြွက်ဘီးပေါ်သို့ပွေးလေ၏ဖြစ်စေသို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာအထိအလေးရုပ်သိမ်း။ အထူးသသုတေသီတိရစ္ဆာန် '' အမြီးမှအလေး taped သူတို့ကိုအကြိမ်ကြိမ်ခုခံလေ့ကျင့်ရေးတူအောင်ဖန်တီးရန်အနည်းငယ်သာလှေကားကိုတက်ခဲ့ရပါတယ်။
ရက်သတ္တခြောက်ပတ်ပြီးနောက်နှစ်ဦးစလုံးစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းအုပ်စုများအတွက်တိရိစ္ဆာန်များကိုသူတို့လေ့ကျင့်သင်ကြားမတိုင်မီသူတို့ခဲ့ထက်မှတ်ဥာဏ်စမ်းသပ်မှုအပေါ်ပိုကောင်းသွင်းယူခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့အလောင်းနှင့် revelatory ခဲ့ကြောင်းဦးနှောက်ထဲမှာပေါ်မယ့်အရာကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါသိပ္ပံပညာရှင်များအပြေးသမား '' ဦးနှောက်တစ် BDNF အဖြစ်လူသိများပရိုတိန်း, သို့မဟုတ်တည်ဆဲအာရုံခံများ၏ကျန်းမာရေးကိုထောကျပံ့နှင့်အသစ်ဦးနှောက်ဆဲလ်များ၏ဖန်တီးမှုဟများထံသွားရောက်ကာစည်းရုံးလူသိများသောဦးနှောက်-ဆင်းသက်လာ neurotrophic အချက်များ၏တိုးချဲ့အဆင့်ဆင့်ပြသကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါကြွက်အလေးချိန်-သင်တန်းဆရာ '' ဦးနှောက် BDNF ၏တိုးချဲ့အဆင့်ဆင့်မပြခဲ့ပါဘူး။
အဆိုပါအမြီးသင်တန်းဆရာသို့သော်သူတို့၏ဦးနှောက်နှင့်အပြေးသမားကိုပြု၏ထက်အသွေး၌အခြားပရိုတိန်း, insulinlike growth factor ၏သိသိသာသာမြင့်မားတဲ့အဆင့်အတန်းရှိကိုပြု၏။ ဤသည်ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းဆဲလ်အချင်းချင်းကွဲပြားခြင်းနှင့်တိုးတက်မှုနှုန်းကိုအားပေးအားမြှောက်နဲ့အများဆုံးဖွယ်ရှိဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ဖို့ပျက်စီးလွယ်မွေးကင်းစအာရုံခံကူညီပေးသည်။
အခုအသစ်သုတေသနအားလုံးအကြံပြု, ထရေဇာလျူ-Ambrose, အဟောင်းအမြိုးသမီးမြားနှငျ့အတူစမ်းသပ်ချက်ကြီးကြပ်သူကိုဗြိတိသျှကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်မှာဦးနှောက်သုတေသနစင်တာတစ်ခုတွဲဖက်ပါမောက္ခကပြောပါတယ်, အများဆုံးကြံ့ခိုင်ဦးနှောက်ကျန်းမာရေးအတွက်ပြုလုပ်ထည့်သွင်းဖို့ဖြစ်ကောင်းအကြံပြုလိုတယ်င်ကြောင်းအဘယျသို့ အေရိုးဗစ်နှင့်ခုခံရေးလေ့ကျင့်ရေးနှစ်ဦးစလုံး။ ဒါဟာဖြစ်နိုင်ကိုခန္ဓာကိုယ်နှင့်ဦးနှောက်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောပရိုတိန်းများလွှတ်ပေးရန်တစ်စင်းအားအသုံးပြုပုံသူမကပြောပါတယ် "ရွေးချယ်သိမှတ်ခံစားမှု၏ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်ပစ်မှတ်ထား" လေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးအစားတခုချင်းစီပုံရသည်။
ဒါပေမယ့်သူမ, သင်ကအနည်းဆုံးမှတ်ဉာဏ်တိုးတက်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌, အေရိုးဗစ်သို့မဟုတ်ခုခံလေ့ကျင့်ရေးအပေါ်တစ်ခုတည်းကိုသာအာရုံစူးစိုက်ရန်ရွေးချယ်လျှင်စိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုအပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ မည်သည့်လေ့ကျင့်ခန်း - - ခြုံငုံသိမြင် function ကိုအပေါ်လေးနက်ခဲ့ကြလေ့ကျင့်ခန်းများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအနေဖြင့်လေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးအစားတခုချင်းစီ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုသူမကပြောပါတယ်, သိမ်မွေ့ခဲ့ကြသည်။
"ကျနော်တို့ကဤစမ်းသပ်ချက်စတင်ခဲ့သည့်အခါ" ဟုသူမကပြောပါတယ်, ဆဲအောင်မြင်မှုကိုယ်စားပြုကြလိမ့်မည်ဟုသောကငျြ့သုံးသူစေတနာ့ဝန်ထမ်းအကြားမှတ်ဉာဏ် function ကိုတွင် "ကျွန်တော်တို့အများစုကအကောင်းဆုံးမှာကျနော်တို့လျော့နည်းကျဆင်းမှုကိုတွေ့မြင်ချင်ပါတယ်, ထင်" ။ သို့သော်မျှသာလူရဲ့မှတ်ဥာဏ်ဆုံးရှုံးမှုဖုံးလွှမ်းနေတာကို ကျော်လွန်. သူမဒီနေ့သင်လေ့ကျင့်ခန်းအကြောင်းကို waffling နေလျှင်, သတိရရကျိုးနပ်သည်, ထိုတစ်ဦးရလဒ်ကို "ငါတို့သည်အမှန်တကယ်တိုးတက်မှုများကိုမြင်လျှင်" လို့ပြောပါတယ်။